#Madagascar -: Fikojakojana ny lalana : « Zava-dehibe ny fitsitsiana sy ny fahaiza-mitantana | «ONG Lalana Blog
#Madagascar -: Fikojakojana ny lalana : « Zava-dehibe ny fitsitsiana sy ny fahaiza-mitantana »
Isan’ny teboka nanehoan’ny "Cercle de Reflexion, d’Evaluation et d’Appui au Secteur BTP" (Creabtp) ny heviny nandritra ny valan-dresaka narahina ady hevitra ny faha-17 novambra teo tetsy Analakely ka nifanazavana momba ny fisintahan’ny fanjakana amin’ny andraikitra sasantsasany ny tontolon’ny fikojakojana ny lalana na ny "entretien routier".
Nomarihin-dRabemanantsoa Auguste avy amin’ny "Creabtp fa "nanomboka tamin’ny fisintahana, dia tsy nanavao ireo fitaovana enti-miasa, tahaka ny BullDozer, ny Niveleuse, ny Camions bennes, ny camions citernes, ny compacteurs, ny enrobeuses, ny chargeurs , sy ny maro hafa intsony ny ministeran’ny Asa Vaventy, ary najanona ny fividianana ireny fitaovana ireny, ary izay te-hanome fitaovana koa aza dia noraran’ny "Banky Iraisampirenena tsy hanome intsony".
Raharinosy Pascal, isan’ny tomponandraikitry ny "Creabtp, koa dia nanipika fa "ny taona 1994 no nandray fanomezana farany avy amin-dry zareo Japoney ny ministeran’ny Asa vaventy ka nanomboka ny taona 1996, dia najanona koa ny fandraisana mpiasampanjakana tamin’ny alalan’ny fifaninanana, dia ireo manam-pahaizana momba ny lalàna toa ny Injeniera, ny lefitra teknika, ny Agents Teknika.
Notsiahivin’ny Creabtp ny anton’ny nampiharana ny fisintahana, dia tsy inona akory fa ny Fampiharana ny Fanitsiana ara-drafitra (Ajustement Structurel) nifanarahan’ny mpitondra tany amin’ny taona 1990 tany, tamin’ny mpamatsy vola iraisam-pirenena, ka nahavoatery ny ministeran’ny Asa Vaventy ho nisintaka tamin’ny fikojakojana ny lalana koa.
Araka ny fanazavana nataon’ny Creabtp dia ny fampandrosoana ny orinasa madinika sy salasala (PME), no antony lehibe noheverin’ny Mpamatsy vola ho tanjon’ny fisintahana. Ny zava-nisy anefa, hoy ireto ao amin’ny Creabtp dia tsy mivelatra akory ireo PME ireo satria tsy nahavidy ireo fitaovana izay sady maro no goavana ary lafo vidy izay ilaina amin’ny fanatanterahana ny asa. Etsy ankilany, tsy afaka manarama teknisianina manam-pahaizana matihanina momba ny lalana koa izy ireny.
Nambaran’izy ireo koa fa "ny antony dia tsy sahy tena hiroboka amin’izany ireo orinasa madinika sy salasala (Pme) raha tsy mahazo toky fa ho voaverina ny vola nividianana ireo fitaovana ireo. Noho izany, tsy tafavoaka ihany koa ny PME na ireo Orinasa madinika sy salasala, hoy ihany ny fanampim-panazavana.
Navoitran-dRaharinosy Pascal fa " ny minisitera tsy manam-pitaovana intsony fa karazan’ny maty, ary ireo Orinasa madinika sy salasala (PME) tsy nahavita azy satria tsy velona. Tsy vita intsony ny fikojakojana ny lalana, ary ratsy ny lalana, indrindra indrindra ireo làlan-tany (route en terre).
Ny tsy azo hamaivanina eo anoloan’izany rehetra izany, hoy indray Rabemanantsoa Auguste dia rehefa ratsy ny làlana, dia misy fiantraikany lehibe eo amin’ny fivezivezen’ny olona sy ny fananany, eo amin’ny fahalafosan’ny saram-pitaterana ka miantraika amin’ny vidin’ny zavatra ilaina an-davanandro (produits de première nécéssité = PPN), eo amin’ny famokarana, eo amin’ny fandriampahalemana, eo amin’ny fizahan-tany.
Raha fintinina, hoy izy, rehefa ratsy ny làlana, dia tsy mandeha ny toekarena, ny sosialy, ny fandriampahalemana.
Eo amin’ny fitantanana ny asa indray, dia averina amin’ny "Subdivisions" ny asa fanaony taloha, hoy ihany ny Creabtp, ary hamafisina ny toerany eo amin’ny fahaiza-manaon’ireo karazan’asa rehetra momba ny fikojakojana.
Tsy nohadinoin-dry Raharinosy Pascal ny eo amin’ny fampiroboroboana ny Orinasa madinika sy salasalany, izay nanipihan-dry zareo fepetra, toy ny fanohizana ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’izy ireo ka hampifamenoana ny Asa "en régie Directe" sy ny Asa "à l’Entreprise" (Complémentarisation). Averina koa ny "cantonniers" sy ny fampakana andraikitra ireo masoivoho manakaiky ny làlana na ny "Unités de proximité", hoy hatrany ireto manam-pahaizana amin’ny asa vaventy ireto.
Ankoatra izany, na misy fisintahana na tsia, hoy ny Creabtp, dia takiana hatrany ny fahaiza-mitantana ny kely ananana. Io fahaiza-mitantana io, dia tsy midika hoe fitsitsiana fotsiny fa ao anatin’izany ny fitantanana tsy be kolikoly (corruption), ny fitantanana mangarahara (transparent), ny fahaizana mandahatra asa ara-pahamehana (programmation), ny fahaizana tsy manataraiky ny fanombohana ny asa fikojakojana ny lalana . Ny asa fikojakojana ny làlana 2012 izao ohatra, tokony hanomboka ny volana Aprily teo, nefa ny Oktobra 2012 mbola tsy nanomboka; ary tsy ho hita akory izay tombontsoa mivaingana naterak’ilay fikojakojana dia ho simban’ny orana sahady ny eny amin’ny làlan-tany.